Iwo akanakisa ekufungidzira mabhuku: chii chinonzi fungidziro uye ndedzipi dzakanakisa | Zvazvino Zvinyorwa
Iyo yekufungidzira genre ndeimwe yeakanyanya kuwanda maererano neakanakisa ekufungidzira mabhuku. Uye ndezvekuti kune akawanda mazita akakodzera evanyori vatinogona kudoma uye iwo ari pachena mareferenzi erudzi irworwo. Muchokwadi, urwu rudzi rwebhuku nderimwe rekutanga kuverengerwa, sezvo ivo vari kuvaraidza uye vachibvumira iyo fungidziro kubhururuka.
Zvino, kunyangwe paine zviuru zvemabhuku pamusika, zviripo mamwe anoonekwa kunge akanakisa mabhuku ekufungidzira, Kunodiwa kuverenga kune chero muverengi ane shungu nezve chidzidzo ichi. Uye isu takurudzira kuita rondedzero yavo yekumhanyisa basa rako uye kuti iwe uzive kuti ndeapi awakaverenga uye ndeapi akamirira. Iwe unoda kuziva yedu runyorwa?
1 Chii chinonzi kufungidzira
2 Chinyorwa cheakanakisa mabhuku eanofungidzira
2.1 Ishe wemhete
2.2 Makoronike eNarnia
2.3 Mabhuku akanakisa ekufungidzira: Harry Potter
2.4 Akanakisa Ekufungidzira Mabhuku: Iyo Neverending Nyaya
2.6 Chronicle yemhondi yemadzimambo
2.7 Iyo nhare yakasviba
Chii chinonzi kufungidzira
Kufungidzira, iyo yekufungidzira genre kana yekufungidzira zvinyorwa, sekuzivikanwa kwazvinoita, ndeimwe yenyaya dzakabudirira kwazvo pamusoro pemakore. Inoonekwa ne "kutyora" nezvazviri, ndokuti, izvo zvakagadzirirwa ndizvo gadzira nyaya inopfuura chokwadi, uko munyori ane rusununguko ruzere rwekuvandudza kufunga kwake. Mune mamwe mazwi, isu tiri kutaura nezve genre uko pasina miganho, zvese zvinogona kugadzirwa sekureba kwazvinoita zvine musoro kuti nyaya yacho.
Muchiitiko chekuti iwe hauzive, fungidziro rudzi rwanga rwuri nesu kwezviuru zvemakore. Muchokwadi, zvinofungidzirwa kuti mavambo ayo akatanga nengano uye ngano dzevanhu vekare, uko kwaitaurwa nyaya dzemagamba akadzidza zvidzidzo, kana avo vakashanda senge mareferenzi evamwe vanhu. Idzo nyaya dzakataurwa nezwi, dzaive dzisina kunyorwa, zvirinani pakutanga. Uye ndezvekuti kujekeswa kwakajeka kwemhando inonakidza ndeye, pasina mubvunzo, Tolkien, pamwe nemazita makuru senge hama dzaGrimm, George RR Martin, Terry Pratchett ...
Chinyorwa cheakanakisa mabhuku eanofungidzira
Kana iwe uchida kuziva mabhuku anofanirwa kunge ari pane yako runyorwa rwezvakakosha, pano isu ticha taura nezve yega yega kuitira kuti iwe uzive chete diki diki remhando dzese dzakanakisa dzefungidziro mabhuku akanyorwa (uye isu tichava zvechokwadi siya zvimwe zvacho).
Sezvatakambotaura kare, JRR Tolkien mucherechedzo munyika yefantasy uye, nekuda kweichi chikonzero, inofanira kunge iri pane iyi runyorwa. Nhasi rinofungidzirwa senge bhuku rekare, asi haribude muchitaera. Uye zvakare, izvo zvakagadziriswa zvebasa rake zvakabvumira kuti zvirege kuwira mukukanganwa uye vanyori vatsva vazhinji vemazuva ano vakavakirwa pane nyaya dzaTolkien.
The Lord of the Rings inyaya yaFrodo Baggins, hobbit ane chinangwa ndechokuparadza yakasarudzika Mhete iri yaSauron, murima ishe. Kana akakwanisa kuitora, inozonyudza yese yepakati-pasi murima; saka, mune yake yekushanya anozoperekedzwa nevamwe vatambi vanomiririra iwo marudzi anogara mu "nyika."
Ehe, iwe haugone kukanganwa kuti pane yapfuura nyaya, Iyo Hobbit; uye inotevera (iri pamberi pavo vese asi ichiverengwa gare gare), inova iyo Silmarillion. Matatu makuru mareferenzi uye akatarisisa akanakisa mafungidziro mabhuku.
Iyo Makoronike yeNarnia yakavakirwa pa saga yemanoveli akanyorwa na CS Lewis. Mavari, munyori akagadzira Narnia pasina nzvimbo, nyika inotonga shumba Aslan uye inogarwa nezvisikwa zvengano, mhuka dzinotaura uye hongu, villains zvakare. Hama ina dzinouya panzvimbo ino kuburikidza nemashiripiti kabhodhi uye, sezvo nyaya ichienderera mberi, tinowana shanduko yevatambi (kuwedzera kune shanduko mavari).
Mabhuku akanakisa ekufungidzira: Harry Potter
Ehe hongu, Harry Potter ibhuku zvakare iro, kunyangwe richifungidzirwa kuve remhando yevechidiki, rakapoteredzwa mukati mekufungidzira. Mumabhuku nyaya inotaurwa ine zvese hunhu hwekufungidzira: nyika isingaite, mavara asipo, mashiripiti ...
Kana iri nyaya, inotizivisa kumukomana uyo anotanga kudzidza pachikoro cheHogwarts chemashiripiti uye huroyi, uye kuburikidza nemabhuku iye anowana zvakavanzika pamusoro pevabereki vake, nezve hupenyu hwake uye nezve zvimwe zvisikwa, kusanganisira "akaipa akaipa ". Ehezve, hapana kushomeka kwekunakidzwa uye mashiripiti.
Akanakisa Ekufungidzira Mabhuku: Iyo Neverending Nyaya
Michael Ende aive munyori webhuku iri, uye muzuva rayo raive rakabudirira zvikuru. Muchokwadi, yaive imwe yeaya akakwanisa kusvika kune dzimwe nyika, sezvo yakashandurwa mumitauro makumi matatu nematanhatu.
Uye nei kubudirira uku? Zvakanaka, nekuti akasanganisa iyo chaiyo nyika neiya yemashiripiti, nokudaro achigadzira rondedzero kwaunogona kuzviratidza iwe uye panguva imwechete iwe uchishuvira kugona kurarama mukana wehunhu.
Iyi saga yemabhuku yakanyanyisa, kubvira ine mabhuku anodarika makumi mana. Uye inozivikanwa nekufungidzira, asiwo nekuseka. Muchokwadi, kune mareferenzi kune mamwe enganonyorwa enganonyorwa, ehe, kuenzanisa izvi.
Yakanyorwa naTerry Pratchett, ichi chirevo chakakura pakati pevateveri veiyo fantasy genre nekuda kwenyika iyo inogadzirwa mavari, pamwe nekuseka kwaunowana. Mune mamwe mazwi, iwe uchapedza maawa uchiverenga nekuseka iwe uchizvidya.
Chronicle yemhondi yemadzimambo
Yakanyorwa naPatrick Rothfuss, ine imwe Tolkien vibe kune vamwe vanyori, vazhinji vacho vanoifarira uye vamwe havaifarire nekuti hapana "chakaipa." Icho chaicho chiri nhoroondo yemunhu mukuru, Kvothe, uyo anorondedzera mafaro aakave nawo pamusoro pemakore. Zvisinei, tichifunga kuti bhuku rechitatu harisati rabuda (uye munyori anga achitiita kuti timirire kwemakore manomwe), chokwadi ndechekuti hazvizivikanwe kana ichigona kushandura nyaya yacho.
Iyo nhare yakasviba
Stephen King anozivikanwa kuve nyanzvi yekutyisa. Asi chokwadi ndechekuti Nenyaya iyi, yakanangana nedetembo, Mambo akaruka mhando yekufungidzira. Mariri uchasangana ne protagonist, Roland Deschain anobva kuGiriyedhi, akatsunga kufamba nepakati peMiddle World kunotsvaga iyo Dark Tower, inzvimbo inogara mhondi iyo yauraya vanhu vake vese.
Kunyangwe iri fungidziro, chokwadi ndechekuti inosanganisa zvinhu zvakawanda zvekumadokero ekare, pamwe nesainzi fungidziro (masuo anotora "gamba" redu kune mamwe nyika), kutya (nevanoverengeka vevavengi vaanosangana navo ...).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku akanakisa ekufungidzira
Ishe weRings, ndinofunga nekure rimwe remabhuku akanakisa ekufungidzira akambonyorwa. Iri basa rehunyanzvi.